Famadihan-Tanindrazana Ny Fandrindram-Piterahana, Hoy ny Filohan’i Torkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 10:31 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, русский, Español, Español, English
Erdogan. Official Flickr, azon'ny rehetra ampiasaina.
Tao anatin'ny 72 ora, tati-baovaon'ny fampitam-baovao iraisampirenena momba an'i Torkia ireto manaraka ireto “Mitomboa sy mihamaroa: Mampitandrina ny Miozolomana ny filohan'i Torkia”; “Mampitandrina ny Miozolomana amin'ny fandrindram-piterahana i Erdogan an'i Torkia”; “Tsy natao ho an'ny Miozolomana ny fandrindram-pianakaviana, hoy ny filohan'i Torkia”; ary “Erdogan an'i Torkia: Tsy tokony hisy fianakaviana miozolomana hiditra amin'ny fandrindram-piterahana”.
Izany no tian'ny Filoha Erdogan antsoina hoe “Torkia Vaovao”, ary olana lehibe ho an'ny mpanao fanantenana hiarovana ny vehivavy izany.
Tamin'ny fanamarihana ny andron'ny vehviavy tamin'ny volana marsa i Erdogan niteny fa “ambonin'ny zavatra rehetra dia reny” ny vehivavy ary nampiany fa tsy mitovy lenta ny lehilahy sy ny vehivavy, fanamarihana efa nataony tamin'ny 2014 raha niampanga ny feminista ho tsy manaiky ny mahareny ry zareo.
Ary tamin'ny 2014, nilaza ny Praiminisitra Lefitra Bulent Arinc fa tsy tokony hihomehy imasom-bahoaka ny vehivavy, izay niteraka setriny maro avy amin'ny vehivavy tiorka izay nisioka tamin'i Arinc amin'ny diezy #kahkaha [hehy] raha mamoaka ny sarin'izy ireo eo am-pihomehezana.
Eo amin'ny sehatra pratika, nanolo-kevitra ny hamerana ny zo hanala zaza, ny pilin'ny ampitso maraina ary ny fiterahana amin'ny fandidiana ny governemanta fehezin'ny AKP (Antokon'ny Rariny sy ny Fampandrosoana) misy an'i Erdogan, na dia tsy nisy lasa lalàna ofisialy aza ireo.
Ny mampihomehy fa tamin'ny fotoana niresahan'i Erdogan ny fandrarana ny fandrindram-piterahana, Ramatoabe Emine Erdogan kosa teo ampanaovana kabary maherihery nandritra ny lanonam-pamaranana iray tao Istanbul “Fiatrehana Valiny afa-Mihetsiketsika: Vehivavy” izay niantsoany ny hamaranana hatreo ny fanambakana ny asam-behivavy.
Araka ny Fampilaharana ny elanelana eo amin'ny lahy sy ny vavy nataon'ny Tsenan-Dresaka Ara-Toekarena Manerantany tamin'ny taona 2015, dia laharana faha-130 amin'ny firenena 145 i Torkia. Ny tatitra navoakan'ny minisitera tiorka misahana ny fianakaviana sy ny politika sosialy tamin'ny herintaona no namehy fa ianjadian'ny herisetra an-tokatrano ny 40%n'ny vehivavy.